तिनीहरूले साना थिए र आज्ञाकारी छोरा अचानक एक निरन्तर पिन्चे र discontented किशोरी मा उत्तेजित गर्दछ जब आमाबाबुले संग जीवन को कठिन हुन्छ। यो उमेरमा बच्चा आफ्नो स्वतन्त्रता प्रमाणित गर्न प्रयास गरिरहेको छ। र उहाँले कार्य पूरा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहन्छ।
तर एक बच्चाको आमाबाबुको लागि सधैं मनपर्ने र सबै भन्दा राम्रो छ। तसर्थ, संचार मा कठिनाइ भए तापनि घनिष्ठ मान्छे उनको छोराको जन्मदिन चकित गर्न चाहन्छु। तर यो उमेर मा यो सजिलो छ। खैर, रुचि केहि संग 13 वर्षीया केटा भने। त्यसपछि, आफ्नो शौक थाह, तपाईं एक रोचक र स्मरणीय उपहार प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो अक्सर किशोरी कम्प्युटरमा भन्दा अन्य केहि रुचि छैन भनेर हुन्छ।
तेह्र को एक केटा को लागि हँसिलो जन्मदिन पार्टी
कि आमाबाबुले हुर्केपछि छोरा सिकाउन सक्छन् पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपहार - एक क्याफे वा पिज्जा साथीहरूसँग छुट्टी मनाउन छ। 13 वर्ष को एक किशोरी सामान्यतया उहाँले आफ्नो जन्मदिन हेर्न चाहनुहुन्छ के थाह छ। बस उसलाई सही विकल्प दिन आवश्यक छ किनभने। उहाँले दान स्वतन्त्रता कदर हुनेछ।
त्यहाँ धेरै उपहार विकल्प छन्। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को रोचक विचार गर्नुहोस्।
वर्तमान मुद्रा - बच्चा को लागि एक राम्रो उपहार विचार
जन्मदिन पैसा दिन - सजिलो तरिका स्थिति बाहिर। एक बच्चा आफ्नो कदर सपना मा केही मात्रामा सङ्कलन गर्दा तर यो केवल मामला मा स्वीकार्य छ। र यो यस्तो उपहार उहाँलाई आनन्द कारण भनेर चिनिन्छ।
तपाईं जन्मदिन अभिवादन विचार गर्न आवश्यक छ। 13 वर्ष पुरानो केटा हरेक दिन गर्दछ। सबै रोचक र स्मरणीय हुन छ। यो गर्न, तपाईँलाई एउटा उपहार आवश्यक र तदनुसार व्यवस्था।
प्लास्टिक कार्ड। यसलाई कुनै पनि स्टोरबाट एक उपहार कार्ड, केटा को सम्बन्धित चासो हुन सक्छ। वा बैंक, जुन एउटा वयस्क जस्तै महसुस हुनेछ। कुनै पनि घटना मा, स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न एक किशोरी सिकाउन यस्तो उपहार।
तपाईं आश्चर्य को तत्व प्रयोग र वस्तुहरूको कार्यालयमा नगद प्याक गर्न सक्नुहुन्छ: एक पेन्सिल मामला, पुस्तक।
आफ्नै हातमा पैसा रूख। त्यहाँ उपहार को उत्पादन को लागि धेरै कार्यशालाओं छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, र आफैलाई बनाउन वर्तमान, 13 वर्षीया केटा गुणा खुसी हुनेछन्।
सबैलाई चकलेट प्रेम गर्नुहुन्छ। यो एक चकलेट बार उपहार वा चकलेट को एक तरिकाले र्याप बक्स लुकाउन उपयुक्त छ।
बेलुन सधैं उद्धार गर्न आउँछ। एक ट्यूब मा कन्फेटी संग एक बल मा प्रत्येक बिल खोल्दै र tucked, हामी एक मूल उपहार दिनुहोस्।
पैसा ओरिगेमी। , ओरिगेमी को प्रविधी प्रयोग गरेर कुनै पनि आंकडा को रूप मा पैसा लुकाउन।
सबै किशोरीहरूको आफ्नो साथीहरूसँग बाहिरी गतिविधिहरु प्रेम, त्यसैले अविस्मरणीय अनुभव - तपाईं के आवश्यक छ। विकल्पहरू:
तपाईं सही विषयहरू छनौट यदि खोज-कोठा, कुनै पनि केटा प्रसन्न हुनेछ।
पेन्टबल - एक महान विकल्प। साथीहरू र राम्रो मुड संग संचार सारा दिनको लागि प्रदान गरिएको छ।
एक किशोरी शारीरिक कौशल छ भने, तपाईं चढाई जिम लागि रोज्न सक्नुहुन्छ। फेरि एक पटक, छोरा एक वयस्क जस्तै महसुस गर्न सक्षम हुनेछ।
कार्टिङ - धेरै रोमाञ्चक खेल। र तपाईं आफ्नो साथीहरूसँग सवारी भने, त्यसपछि ठूलो गर्छन्।
हरेक आमाबाबुले आफ्नो हुर्केपछि छोरा मा थप रुचि, थाह छ। र पक्कै मा भने राम्रो दिन को लागि नायक सोध्नुहोस्।
जीत-जीत अवस्था - ग्याजेट। यो महंगा छ हुनाले यसलाई सामान्यतया जन्मदिन केटा (13 वर्ष) आमाबाबुले गर्न यस्तो उपहार छ। किशोरीहरूको, आधुनिक इलेक्ट्रनिक्स को जो कोहीले, प्रेम जस्तै। त्यसैले, यो उमेर मा फोन वा मेरो जन्मदिन लागि ट्याब्लेट नयाँ मोडेल उत्तेजना धेरै कारण हुनेछ।
यसलाई चयन गर्न कठिन हुने छैन वरदान केटा गर्न उहाँले एक शौक छ भने 13 वर्ष। केटा मा विज्ञान र अनुसन्धान रुचि छ भने, तपाईंले एक माइक्रोस्कोप दिन सक्छन्। बच्चा जस्तै उपहार खुसी हुनेछ।
धेरै योग्य उपहार - एक दूरबिन। को किशोरी ताराहरू हेर्न कसरी रोमाञ्चक कल्पना गर्न सक्दैन। फेरि प्रयास गर्नुहोस् - तोड्न सक्दैन टाढा।
अक्सर यो उमेरमा केटा र विभिन्न प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ। प्रयोग को लागि रसायन सेट भन्दा स्वागत हुनेछ। एक बच्चा संगीत रुचि छ भने, इच्छित साधन सकारात्मक भावना धेरै ल्याउनेछ खरीद।
सबै जीवन भने - एक ब्रान्ड नयाँ बल को एक खेल वितरण छ, लीन वा फिटनेस एक वास्तविक आनन्द हुनेछ। र यदि यी कुराहरू आफ्नो मनपर्ने टोलीको लोगो संग जाँदैछन्, यो गुणा खुसी हुनेछ।
माछा मार्ने लागि tackles - एक महान उपहार। त्यहाँ देश यात्रा गर्न मौका छ जब तालाब गर्न, यो बच्चा संग बांड ठूलो तरिका हो। Tackles धेरै उपयोगी छन्।
किशोर फोटोग्राफी मा मुछिन सक्छन्, र भने, एउटा राम्रो सहज क्रिया क्यामेरा दिने, तपाईं एक बच्चा सही दिशा मा पठाउन सक्नुहुन्छ।
जन्मदिन केटा को लागि छनौट उपहार (13 वर्ष), जो को साना ज्ञात छ चासो, कम्प्युटर सम्बन्धित कुरा किन्न। यो मूल माउस, ब्रांडेड हेडफोन, वक्ता र एक वेब क्यामेरा हुन सक्छ। एक खेल कन्सोल सबैभन्दा मांग जन्मदिन प्रसन्न हुनेछ।
फैशन ठूलो उपहार हुन सक्छ। बच्चा लामो कुनै पनि फैशन वस्तु चाहन्थे छ भने, यो छुट्टी खरिद गर्न समय सकियो गर्न सकिन्छ। तर लुगा स्टाइलिश र लामो प्रतीक्षा, अर्को जन्मदिन SPOILED गरिनेछ हुन छ।
कुनै पनि उमेर मा सबै बच्चाहरु कुकुर चाहन्छु। त्यसैले, तपाईं अरूलाई, यो पाल्तु जनावर भन्दा कम लागि बच्चा जिम्मेवारी सिकाउन चाहनुहुन्छ भने - यो विकल्प।
निस्सन्देह, यी उपहार मात्र आमाबाबुले वा नजिक नातेदार द्वारा सबै।
के मित्र 13 वर्ष को लागि दिन? यो केटा रुचि हुन सक्छ विभिन्न कुरा छन्। विशेष गरी सबै लगभग समान छ कि उमेर मा चासो।
अब सबैलाई फोन छ। स्मार्टफोन लागि फैशन झोला, मेमोरी कार्ड वा हेडफोन प्रस्तुत, यो जन्मदिन खुसी पार्न एकदम सम्भव छ।
कम्प्युटर सामान कहिल्यै superfluous हुनेछ:
- यो जन्मदिन को फोटो संग माउस प्याड;
- कम्प्युटरमा खेल;
- एक वेब क्यामेरा।
विरोधी तनाव खेलौना - कमिला खेत। काठ चींटियहरुलाई, नीलो जेल यसको ट्रयाक बनाउन कम्प्युटरबाट सबै भन्दा inveterate खेल चरणको अलमल्याउन।
तिनीहरूले आफ्नो रुचिसँग मेल खाने भने विश्वकोश वा एक रोचक पुस्तक केटा खुसी हुनेछ।
तपाईं जन्मदिन केटा वा मूर्ति एक फोटो सहितको मग वा टी-शर्ट दिन सक्छन्।
रेडियो-नियन्त्रण उपकरण वयस्क, केवल बच्चाहरु को लागि पनि रमाइलो छ। अधिक कि सँगै खेल्न रमाइलो हुन सक्छ।
नियन shoelaces वा यो उमेर समूहको लागि विशेष डिजाइन हेडफोन।
खेल "एकाधिकार" मजा सारा कम्पनी हुनेछ।
तह चक्कु - हरेक किशोरी को सपना। यस्तो उपहार प्रस्तुत, तपाईं धेरै वर्ष को लागि आफूलाई एक स्मृति छोड्न सक्नुहुन्छ।
भागेका अलार्म घडी - धेरै हास्यास्पद उपहार।
जन्मदिन केटा 13 वर्ष, एक्लै एक मित्र को लागि उपहार, तपाईं मेरो सबै हृदयले पकाउन गर्न आवश्यक छ। एक उपहार दिन आदेश मा, जन्मदिन केटा राम्रो मनोवृत्ति लाग्छ।
उपहार विचारै, यदि जन्मदिन केटा - भाइ
उपहार को अवसर मिलेन गर्नुपर्छ। र तपाईं महंगा कुरा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने चिन्ता छैन। साना छोराछोरीलाई पुरानो आदर्शित गर्नु गर्छन। त्यसैले यसलाई बहुमूल्य आफ्नो ध्यान हो, त्यसैले महत्त्वपूर्ण उपहार छैन।
मूलतः भाइहरूलाई प्रत्येक अन्य रुचिहरु सजग छन्। र वर्तमान को विकल्प संग समस्या हुँदैन।
केही उपहार विचार
पोस्टर वा क्यालेन्डर, किशोर मूर्तिहरूसित, एक विशेष कम्पनी मा गरेको। आफ्नो सम्मान मा जन्मदिन र बधाई को फोटो संग एक पोस्टर।
आदेश पहेली। तस्विर अनुरूप भाइ चासो साथ।
सुशील टोपी वा खेल झोला। तर कुरा मनमोहक हुन छ।
झोला पन्चिङ। तिमी मजा सँगै हुन सक्छ।
तपाईं एक भाइ दिन भने उहाँले मन पराएका आफ्ना कुराहरू केही छ कि, आनन्द छैन सीमा छ।
वृद्ध भाइ लागि उपहार
यो उमेरमा बच्चा एक महंगा उपहार दिन वित्तीय क्षमता छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर यो डरलाग्दो छ। यहाँ केही रोचक विचार हो:
तपाईं जन्मदिन को स्वाद अनुसार कोठा सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
किचेनमा - एक महान विकल्प। र सस्तो र सधैं सही कुरा।
चित्रित आफ्नै पोस्टर को जन्मदिन उत्सवमा सकारात्मक भावना ल्याउनेछ।
संचित पैसा पाएपछि वा मेरो आमाबाबुले यो मुद्दा छलफल, भाइ माउस प्याड, एक USB फ्लैश ड्राइव वा डायरी किन्न सकिएन। यी कुराहरू superfluous कहिल्यै छन्।
जन्मदिन अभिवादन 13 वर्ष पुरानो केटा र विशेष गरी मेरो भाइ, तपाईं बिहान लागि योजना आवश्यक छ। जन्मदिनको र खुसी मुड सिर्जना गर्न।
अवसर को नायक खुसी इच्छा थियो कि मुख्य कुरा। एक जन्मदिन उपहार बालक उमेर 13 वर्ष किन्न गाह्रो छैन। तपाईं केवल एक सानो समय र कल्पना गर्न आवश्यक छ।
कुनै पनि तरिकामा - एक उपहार बिना। नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा एक केटी के दिन?
कुपन कहाँ प्रयोग गर्न
बालक लागि वरदान कसरी चयन गर्ने?
मानिस एक जन्मदिन दिन के: प्राणको उपहार छनौट
Manicured नङ - कवर Shellac
पोर्चुगल को रिसोर्ट्स
Deathwing (चूल्हा): उपयोगिता। डेक Deathwing (चूल्हा)। कसरी चूल्हा मा Deathwing प्राप्त गर्न?
Gourami सुन: सामग्री, वर्णन, फोटो
मूत्र विश्लेषण (डिकोड) छोराछोरीलाई के "भन्छ"